इन्टरनेटको इतिहास [Video + Friday Tech]
Aakar August 20, 2010
इन्टरनेट हिजोआज हामी सबैले चलाउँछौ तर के हामी इन्टरनेट को इतिहास को बारेमा जानकार छौँ त ?
हामी इन्टरनेट बाट ईमेल पठाउँछौ, विभिन्न वेवसाइटहरु हेर्छौँ, अन्तर्क्रिया गर्छौँ ।
अहिले हामीलाई सोच्दा लाग्छ, इन्टरनेट नहुँदो हो त, हामी के गरिबसेका हुन्थ्यौँ होला ?
एउटा कुरा अचम्म लाग्न सक्छ, विगत मा भएका विश्वयुद्ध को कारण नै इन्टरनेट को विकास यस तरिका ले भएको हो ।
विभिन्न नेटवर्कहरु मिलेर बनेको अर्को नेटवर्कलाई नै इन्टरनेट भनिन्छ !
सन् १९६० को दशक देखि इन्टरनेट अर्थात नेटवर्कहरु को विकास हुन थालेको हो ।
इन्टरनेट को इतिहास को बारेमा, आज युट्युब बाट एउटा भिडियो लिएर आएका छौँ, एकपटक हेर्नुहोस् धेरै कुरा थाहा हुनेछ !!
Watch Video: History of the Internet
वेदनाथ पुलामी (उमेश ) August 20, 2010 at 10:50 PM
जानकारीमुलक पोस्टको लागि आकार जी लाइ धन्यबाद !
Ddus August 21, 2010 at 12:54 AM
Thankss for Information
http://www.ddusworld.co.cc/2009/12/father-of-internet-vint-cerf.html just click it, i write some month ago about Vint Cerf.
दूर्जेय चेतना August 23, 2010 at 5:35 PM
हो त कस्तो राम्रो जानकारी रहेछ। खुबै मन पर्‍यो।
Anonymous November 12, 2010 at 4:01 AM
D DUS JI "उमेश गजुरेल" November 12, 2010 at 4:01 AM